January 2018 - Ceelhuur Online
Tottenham Hotspur Oo Xaqiijisay Saxiixa Lucas Moura
January 31, 2018 Hafsa Haji162
Tottenham Hotspur ayaa xaqiijisay inay lasoo saxiixatay Lucas Moura oo ka yimid Paris Saint-Germain heshiis waqti dheer ah. 25 jirkaan ayaa qandaraaska u saxiixay kooxda ka dhisan Waqooyiga London ilaa 2023 ka dib markii uu 25 milyan oo ginni kaga soo wareegay kooxda Ligue 1. Waqtiga uu ku sugnaa caasimadda Faransiiska, ciyaaryahanka reer Brazil ayaa […]
Chelsea Oo Dhamaystirtay Saxiixa Olivier Giroud
January 31, 2018 Hafsa Haji207
Chelsea ayaa ku dhawaaqday saxiixa weeraryahanka reer France Olivier Giroud oo ka yimid Arsenal heshiis 18 bilood ah. Giroud, oo 31 jir ah, ayaa xiran doona lambarka 18-aad ee kooxdiisa cusub, waxaana la fahamsan yahay in lacagta lagu iibiyay ay tahay £ 17.5m. Wargeyska ayaa sheegaya in Arsenal ay ku dhawaaqday saxiixa Pierre-Emerick Aubameyang oo […]
Injineero Shiineys ah oo Tobaadkan Booqanaya Dekedda Hobyo
January 31, 2018 admin315
Sida ay inoo xaqiijiyeen ilo xog-ogaal Waxaa la filayaa in Todobaadkan gudihiisa ay Magaalo xeebeedka Hobyo gaaraan Injineero Shiineys ah, kuwaas oo qiimeyn ku sameyn doona dhismaha dekedda. Dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug ayaa dadaal dheeri ah ku bixinaya sidii loo hirgalin lahaa dhismaha dekedda Hobyo. oo noqonaysa hadii la dhiso isha dhaqaalaha Galmudug. […]
Dagaal xalay ka dhacay Magaalada Beledweyne
January 31, 2018 admin148
Dagaal u dhaxeeyay ciidamada Al Shabaab iyo ciidanka Xoogga dalka ayaa wuxuu ka dhacay galbeedka Magaalada Baledweyne, kadib markii Al Shabaab dagaalkaan ay soo qaadeen. Dagaalka ayaa wuxuu ka dhacay xaafadda Doon Subagle Saldhig ciidan oo ku yaallo, markii Xoogaga Shabaab halkaasi ay beegsadeen. Xalay saqdii dhexe ayuu dhacay dagaalkaan, sida ay inoo xaqiijiyeen Saraakiisha […]
January 31, 2018 admin212
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Xaaf oo la filayey inuu maanta soo gaaro magaalada Dhuusamareeb Caasimadda Galmudug ayaa dib u dhacay, waxaana la filayaa in maalinamada beri ah tago halkaas. Madaxweynaha ayaa safarkiisa waxaa ku wehliya wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan maamulkiisa. Waxaana la filayaa in la ambaqaado fulinta heshiiskii Ahlu sunna iyo Galmudug. […]
Dayax Madoobaad Caawa laga arki doono Soomaaliya
January 31, 2018 admin127
Meelo badan oo ka mid ah Caalamka ayaa lagu waddaa in caawa laga arko dayax Madoobaad sidda ay shaaciyeen Hay’addaha la socda Arrimaha Saadaasha. Meelahaasi ayaa waxaa ka mid ah Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya , waxaana ay sheegeen Dayax Madoobaadka Caawa ee Muqdisho waxaa uu socon doono 54 daqiiqo oo ka billaabata 6:14 Daqiiqo […]
Pierre-Emerick Aubameyang Oo U Safraya London
January 30, 2018 Hafsa Haji255
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa lagu soo waramayaa inuu imaanayo London galabta Talaadada si uu ugu dhameystiro hishiiska uu kaga soo wareegaayo Borussia Dortmund ee Arsenal. Heshiis 60 milyan oo ginni ah ayaa la fahamsan yahay in ay ku heshiiyeen labada kooxood, taasoo u jiheysaneysa xiddiga reer Gabon si uu u dhameystiro wareega xiga. Sida laga soo […]
Leroy Sane Oo Garoomada Ka Maqnaanayo Muddo Lix Isbuuc Ah
January 30, 2018 Hafsa Haji179
Pep Guardiola ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Manchester City Leroy Sane uu garoomada ka maqnaan doono muddo lix isbuuc ah ka dib markii uu dhaawac ka soo gaaray kulankii Cardiff City. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka, oo leh 7 gool sidoo kale 12 caawinaad ka sameeyay Premier League ah iyo […]
Man City Oo Dhameystiray Heshiiska Aymeric Laporte
January 30, 2018 January 30, 2018 Hafsa Haji161
Manchester City ayaa ku dhawaaqday saxiixa daafaca ree france ee Aymeric Laporte oo ka yimid kooxda Athletic Bilbao, iyadoo la rumeysan yahay in hishiiskaas uu ku kacay 57 milyan oo ginni. 23 jirkaan ayaa Kevin De Bruyne ka dhigtay inuu noqdo saxiixii ugu qaalisanaa ee reer Citizens ka dib markii qandaraaskiisa lagu burburinayay isbuucaan. Laporte, […]
January 30, 2018 admin158
Waxaa saakay oo Talaado ah xiran qaar ka mid ah wadooyinka Magaalada Muqdisho, kadib markii dadka ay ku soo tooseen ciidamada ammaanka oo xiray wadooyinka, gaadiidkana u diidaya socodka. Wadooyinka xiran saaka ee gaadiidka rayidka loo diidayo, ayaa waxaa ka mid ah Isgoysyada Sheekh Cali Suufi oo Baabuurta loo diidayo dhanka Maka Al-Mukarama inay u […]